Maxaa ka soo kordhay wararka Haaland la xiriirinaya inuu ku sii jeedo Horyaalka Premier League? – Gool FM
Dajiye June 9, 2021
(Yurub) 09 Juun 2021. Dhamaan kooxaha waaweyn ee yurub ayaa waxay ku tartamayaan adeega da’ayarka reer Norway iyo naadiga Borussia Dortmund ee Erling Haaland.
Waxay u muuqataa inay ku adagtahay kooxaha qaar sida Real Madrid iyo Barcelona inay diirada saaraan saxiixa Erling Haaland d xagaagan, halka kooxaha Ingariiska ay si taxadar leh u daawanayaan xaalada.
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa la xiriiray aabaha dhalay ciyaaryahanka si uu u ogaado xaaladiisa, ka dibna wuxuu u sheegay in ciyaaryahanka uu doorbidayo u dhaqaaqista Real Madrid.
Saxafiga Gianluca Di Marzio ayaa shaaca ka qaaday go’aanka kooxaha Chelsea iyo Manchester City ee ah inay la saxiixdaan Haaland, halka City ay dooneyso inay fasaxdo qaar ka mid ah ciyaartoydeeda, sida Laporte iyo Gabriel Jesus kahor inta aysan u dhaqaaqin saxiixa laacibka reer Norway.
Halka milkiilaha kooxda Chelsea ee Roman Abramovich uu doorbidayo inuu diirada saaro saxiixa Harry Kane in ka badan Haaland, maadaama ay diyaar la yihiin qiimo dhan 70 million pounds, si ay kala soo saxiixdaan Kane naadiga Tottenham Hotspur.
Midnimo oo guul ka gaartay kooxda Elman kulan qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League
Ronaldo oo gool kale u dhaliyay xulka qaranka Portugal ciyaartii ay xalay Israel xasuuqeen... (Immisa ayuu jiraa inuu noqdo gool-dhaliyaha ugu sarreeya heerka qaran ee k/c?)